Daawo Sawirada : Mid kamid ah Ragii la socday Gaarigii shalay ku qarxay Muqdisho oo la qabtay isaga oo dhaawac ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay nin dhalinyaro ah oo la sheegay in uu kamid ahaa dabley shalay weerar hubeesan ka geesatay Degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Sargaal katirsan Nabad Sugida ayaa laga soo xigtay in ninka la qabtay uu ahaa ninkii waday gaari shalay ku qarxay agagaarka Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, ninkan ayaana gaariga ka cararay kadib markii uu bucaad kaga galay Degmada Dayniile.
Ninka ay hayaan Ciidamada amaanka oo gacanta ka dhaawacmay ayaa xalay laga soo qabtay mid kamid ah Isbitaalada kuyaala magaalada Muqdisho oo la geeyay, waxaana ninkan hada uu ku xiran yahay xarun Nabad sugida leedahay.
Ciidamada amaanka Degmada Dayniile ayaa shalay gacanta ku dhigay gaariga weerar kasoo geestay Boondheere sidoo kale ay qaraxyo saarnaayeen, gaariga ayaana markii dambe qaraxay iyada o baaritaano lagu waday.
Askarigii sababta u ahaa in gaarigaasi la qabto ayaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxa gaariga ee shalay ka dhacay Dayniile, waxaana dhaawaca askarigan oo katirsanaa maamulka Degmada Dayniile lagu daweenayaa Isbitala kuyaala Muqdisho.
Daawo Muuqaal Cajiib ah “Nolosha Caaradda iyo sida uu Alle Wayne ugu sheegay Qur’aanka, iyo Sayniska oo arrintaa xaqiijiyay